Ny tontolon'ny fanaraha-maso ny media sosialy sy ny analytics | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 11, 2014 Talata, Jolay 5, 2016 Douglas Karr
Ny data kely voalohany amin'ity infographic ity dia mahavariana… ny fitomboan'ny Analytics tsenan'ny fitaovana. Raha ny hevitro dia manondro olana mivady izy io. Voalohany dia mbola mitady fitaovana tsara kokoa isika rehetra hitaterana sy hanaraha-maso ny paikadim-barotra ary ny faharoa dia ny fahavononantsika hampihatra ampaham-bola lehibe kokoa amin'ny tetibola ara-barotra mba hahazoana antoka fa mandeha ny paikadinay.
Rehefa mampiasa haino aman-jery sosialy hifandraisantsika amin'ny hafa izahay dia mamorona làlan-data nomerika amin'ny fifandraisan'olombelona. Rehefa dinihina tsara, ity angon-drakitra sarobidy ity dia afaka mampiseho ny hevitry ny besinimaro sy ny fironan'ny mpanjifa, hanao faminaniana ary hanome fomba fijery. Ho an'ireo orinasa manangona sy mamakafaka tsara ireo angon-drakitra ireo dia mety ho lakilen'ny fahombiazana izany. izany infographic avy amin'ny Demand Metric dia natao hanomezana fikambanana miaraka amin'ny fampahalalana momba ny tontolon'ny fanaraha-maso sy ny fanadihadiana amin'ny media sosialy.
Tsy vaovao ity infographic ity, nefa mizara fitaovana lehibe mbola tsy hitako. Mahagaga ahy foana ny isan'ny sehatra mbola tsy fantatro ny momba anay any!
BrandID - araho amin'ny Youtube ny marikao.
Curalate - sary mandroso Analytics ary algorithms fankasitrahana ho an'ny fandrefesana ny fampielezan-kevitra.
Engagor - Sehatra tena izy ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ara-tsosialy sy ny varotra fifampiraharahana.
Hootsuite - mamoaka, manara-maso ary mitantana ny haino aman-jery sosialy amin'ny orinasanao miaraka amin'ny fahaizan'ny Enterprise.
Iconosquare (teo aloha Statigr.am) - metrika lehibe momba ny kaontinao Instagram.
Komfo - mampiseho ny viralinao fanamafisana na mahatratra ny hafatrao.
Linkfluence - haino aman-jery sosialy ho an'ny marika sy maso ivoho.
Piqora - araho ny fanentanana miorina amin'ny sary avy amin'ny Pinterest, Tumblr ary Instagram.
Plumlytics - Fitantanana media sosialy miaraka amin'ny fihainoana feno sy ny fanadihadiana mialoha.
SimpleMeasured - haino aman-jery sosialy Analytics ampiasain'ny marika ambony.
Sysomos - fandrefesana lalina
manerana ny haino aman-jery sosialy anao, karamaina sy karama.
Tweriod - Fakafakao ny hetsiky ny mpanaraka anao hahitanao ny ora miasa indrindra amin'ny andro hizarana.
Mitadiava lahatsoratra bilaogy vitsivitsy ato ho ato amin'ny sasany amin'ireo sehatra ireo!
Tags: Analyticsmarikacuralatemetric fangatahanaengagorhootsuiteiconosqarekomforohynetbasePinterestpiqorasimplymeasuredfanadihadiana amin'ny media sosialyfanaraha-maso ny media sosialystatigr.amstatigramsysomostweriodWolfram AlphaYouTubezefr
11 Aogositra 2014 amin'ny 1:25 PM
Misaotra tamin'ny fanasongadinana an'i Sysomos eto Douglas!
Raha te hahalala bebe kokoa ianao dia aza misalasala manatona ahy na aminay amin'ny alàlan'ny tranokalanay.
Sheldon, mpitantana ny vondrom-piarahamonina ao Sysomos
11 Nov 2014 amin'ny 5:43 maraina
Fampahalalana matanjaka sy fampahalalana tena lehibe. Nanome fomba fijery mahafinaritra sy mahasoa ianao. Ho fanampin'ireo fitaovana nolazainao tamin'ireto sary etsy ambony ireto dia te hanampy Plumlytics aho. Plumlytics dia manolotra fitantanana media sosialy miaraka amin'ny fihainoana feno sy ny fanadihadiana an-tserasera efa voaorina.
11 Nov 2014 amin'ny 8:54 maraina
Misaotra Piyush - nampidirinay tao amin'ny lisitra i Plumlytic!